Shan meelood oo sixir ah si loo horumariyo sawirkaaga | Abuurista khadka tooska ah
5 meelood oo sixir ah si loo horumariyo sawirkaaga
Mudo badan oo hal abuur leh waqtigeena waxaan raadineynaa goobo aan ku horumarino farshaxan ahaan Laakiin had iyo jeer ma helno meesha ugu habboon ee aan ku qaban karno waana taas, mararka qaarkood, annaga ayaa iska xadideyna. Habka ugu caansan ee fikirka ayaa ah in aysan jirin meelo sixir ah oo noo dhow. Laakiin had iyo jeer maahan sidan oo kale.
Isbaanishka, tusaale ahaan, waxaa ka buuxa aagaggaas oo leh soo jiidasho gaar ah. Maraakiibta, dhismayaasha waaweyn ama qalcadaha ayaa ah tusaalooyinka qaar. Safarada la awoodi karo waxay kugu imaan karaan meelahan wax kayar dhowr saacadood.
Mid ka mid ah meelaha ugu yaabka badan wuxuu ka bilaabmaa badda ...
1 Xiddiga Mareykanka
4 Ma jiraa qof u baahan dhakhtar?
5 Fort ugu liidata
Markab sida jawharad taajkii Sida ku xusan taariikhdeeda bilowga 1939, waxay ka mid ahayd maraakiibta ugu raaxada badan xilligan. Wuxuu soo maray dad badan oo milkiileyaal ah safarkiisa, laakiin waxay markii dambe ku jirtay safar soo maray dekedda iftiinka, ee Fuerteventura oo ku taal magaca American Star markii, duufaan awgood, uu ku xannibmay jasiiradda. Iyadoo aan fursad loo helin markabka in la badbaadiyo.
Dalxiisayaashu waxay tan u rogeen hal mar oo cudurdaar ah si ay u bartaan jasiiradda, laakiin nasiib darro waxay sidoo kale galaafatay in ka badan hal nolol inay isku dayaan inay si fiican u baaraan Taasi waa sababta dadka deggan ay ugu yeeraan markabka cirfiidka. Miyaad dhiiran lahayd
Laga soo bilaabo cimilo dhexdhexaad ah oo diirran waxaan diyaaradda u raaceynaa woqooyiga, halkaas ayaan ku lahaan lahayn dhisme weyn. Cesuras waxaa ku yaal sanatorium loo sameeyay 1920 bukaanka qaaxada. In kasta oo la sheegay in aan waligeed la isticmaalin oo uu ilaa maanta xidhan yahay, haddana waxaad arki doontaa sawirrada goobta oo ah wax cajiib ah. Laakiin waxay leeyihiin meeshu mar dambe kuma sii socoto sidii ay wax u bari jireen. Waa arrin loo socdo. Aan tagno oo aan hurino maleheena
Wax ka macaan isla mar ahaantaana cabsi badan oo adduunka ka jira. Ma qiyaasi kartaa waxay tahay? Haa caruusad. Waa waxa dhacaya markaad ka fikirto warshad caruusadda, laakiin haddii laga tago, waa maxay qaybta wanaagsan? Tani waa waxa ka dhaca Segorbe, warshad nasiib darro dad badan u dhacday, oo ay dhaceen kooxo qaswadayaal ah oo aanan ku heli doonin sixir ay meeshu lahayd. Laakiin taasi waa mid xiiso leh in la ogaado.
Ma jiraa qof u baahan dhakhtar?
Waxaan joognaa caasimada, magaalada magaalooyinka, si aan u aadno meesha ugu argagaxa badan, isbitaal. Oo waxaa jira mid ka mid ah Los Molinos, Madrid, mana aha mid yar. Isbitaal gebi ahaanba laga tegey oo leh cabirro aad u ballaaran. Si sax ah u shaqeynaya afartanaadkii maanta, maahan wax ka badan meel aad ka sawiri karto xaalado aan la qiyaasi karin. Isbitaalkan waxaa sidoo kale loo abuuray cuduro sida qaaxada. Iyada oo daryeel faa'iido leh loo hayo millatariga saddexda ciidan xilligii kaligii-talisnimada. Ayaa ku dhiiran inuu gaaro dabaqa kore?
Fort ugu liidata
Ezkaba, Artica. Halkaas waxaa ka imanaya baxsadkii ugu weynaa ee taariikhda ee taariikhda soo ifbaxay 1938. Meel aad u weyn oo ka duwan noocyadiisa oo dhan. Meeshan yar waxay ku taalaa Navarra oo hada waa laga tagay, waxaa loo isticmaalaa goob booqasho waana wax la yaab leh in sawir la qaado. Taasi waa haddii aad ku dhiirratid inaad gasho.
Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato? Faallo haddii aad jeceshahay waxaanan sameyn doonaa qayb labaad oo ka mid ah qoraalkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 5 meelood oo sixir ah si loo horumariyo sawirkaaga
Xiddiga Mareykanka wuxuu ku dhacay Fuerteventura, maahan Gran Canaria. Dhowr sano ka hor gebi ahaanba way degtay oo mar dambe lagama arki karo xeebta.
Dhab ahaan, waxay ahayd qaladkeyga qoraalka. Waxaan doonayay inaan tixraaco jasiiradaha guud ahaan. Waad ku mahadsantahay sixitaanka!
Habka dardaaranku ugu milmo geesaha